Aafno Khabar | Trusted Online News Protal of Nepal यस्तो छ कोरोना खोप लगाउने तयारी | Aafno Khabar
२०७७ फागुन २० बिहीबार
2021 Mar4Thu
यस्तो छ कोरोना खोप लगाउने तयारी
२०७७ माघ ८ गते प्रकाशित
तस्बिर स्राेत : अनप्ल्यास ।
काठमाडाैं । विभिन्न देशहरुमा उत्पादन भइरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता हेरी हाल विश्वका केही देशहरुले खोप लगाउन सुरु गरिसकेका छन् । बेलायतमा मंसिर २३ गते एक ९१ वर्षिय नागरिकबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने अभियानमा अहिले २४ लाख भन्दा धेरै सहभागी भइसकेका छन् । यसैगरी अमेरिकाले मंसिर २९ गते स्वास्थकर्मीलाई दिएर सुरु गरेको खोप हालसम्म १ करोड ४७ लाख अमेरिकीले लगाइसकेका छन् । समाचार संस्था ब्लुमबर्गका अनुसार ५१ देशहरुमा ४ करोड ४० लाख भन्दा धेरै खोपहरु लगाइसकिएको छ ।
नेपालले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको ‘कोभिसिल्ड’ नामक खोपका लागि आपतकालीन प्रयोग स्वीकृति प्रदान गरेको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले बनाएको यो खोपको प्रभावकारिता ७०% – ९०% रहेको तथ्य विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । आपतकालीन प्रयोगको स्वीकृति प्राप्त भएको ‘कोभिसिल्ड’ खोप पाउने देशहरूको सूचीमा नेपाल रहेको जानकारी भारतकाे विदेश मन्त्रालयले माघ ६ गते दिएको थियो । माघ ७ गते भारतले उपलब्ध गराउने खोपबारे जानकारी दिन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री त्रिपाठीले १० लाख डोज खोप नेपाललाई अनुदान स्वरुप भारतले प्रदान गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा दिए । भारतकाे अनुदानमा नेपाललाई प्राप्त हुनलागेकाे खोप बिहिबार नै नेपाल आइपुग्ने जानकारी पनि मन्त्री त्रिपाठीले दिए ।
-याे सामग्री हामीले southasiacheck.org बाट लिएका हाैँ ।
चीनमा कसरी हुन्छ कृत्रिम वर्षा र हिमपात ?
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सेयरकाे मूल्य कतिसम्म जाला ?
विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास र रोजगारका लागि इम्पेरियल विजनेश कलेज र कुमारी जबबीच सहकार्य
यूएई, चीन र अमेरिकाका अन्तरिक्षयानहरू एकैपटक किन मङ्गल ग्रहमा ?
सुन तोलाको ९० हजार ९ सय
कहाँ पुग्यो भागरथीको बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धान
क्वारेन्टिन खर्चमा कुरा नमिल्दा विश्वकप लिग-२ क्रिकेट सिरिज स्थगित